China Multifunctional Vital Signs Monitor BNC1 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Binic
Fandidiana maimaim-poana amin'ny tariby / tariby
30s ~ 24h ECG firaketana sy fanadihadiana
Fanaraha-maso torimaso Oxygène ho an'ny apnea matory
Fitantanana mpampiasa maro
Support App sy rindrambaiko PC
Mifanaraka amin'ny mpanara-maso ny tosidra
Miaraha miasa amin'ny AirBP amin'ny alàlan'ny Bluetooth
Matanjaka sy mora raisina
Miaraha mitantana ny angona famantarana rehetra ilaina
Mifanaraka amin'ny metatra glucose amin'ny ra
Tohano hanehoana sy hitahiry ny valin'ny fandrefesana izay mifangaro amin'ny metatra glucose amin'ny ra
Mizara ny angona glucose amin'ny ra
88x56x13 mm (singa lehibe)
64g (singa lehibe)
2.7 "efijery mikasika, E-ink HD
Connector Micro D
Modely roa Bluetooth namboarina, tohana 4.0 BLE
Bateria lithium-polymer azo ovaina
Mpanara-maso ny fahasalamana amin'ny fo ao am-paosinao
Azo atomboka amin'ny bokotra iray monja izy io, ary ny efijery mikasika sy ny fitarihana sary dia manamora ny fampiasana azy.
Ny haben'ny karatra sy ny batterie azo averina dia mamela anao hitondra EKG amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
Hatramin'ny 5 minitra fandrefesana
Manohana ny fandrefesana amin'ny tanana na tariby ilay fitaovana.
Fandrefesana 30 / 60s / 5mn Ny fandrefesana lava kokoa dia afaka manome data bebe kokoa handinihana ny endrika onja sy ny fahasalaman'ny fo.
Rehefa mihozongozona ny tanan'ny olona dia ampiasao ny fomba tariby amin'ny pad elektrika azo ampiasaina mba hahazoana valiny marina kokoa.
Fomba fahita isan-karazany
Ny fitarihana samihafa dia manome endrika onjam-peo samihafa ho an'ny famakafakana. Izy io dia manohana ny fandrefesana cableless sy tariby, ary ny famolavolana vaovao dia ahafahana manamarina tariby I / II sy tariby tratra.
Maody mpampiasa indroa mihetsika
Misy maody ho an'ny mpampiasa tokana na ny mpampiasa roa sosona, ny endrika famolavolan'ny mpampiasa bebe kokoa, izahay dia manoro hevitra ny hampiasan'ny mpianakavy.
Ny maody mpampiasa Dual dia afaka mitahiry mora foana ny angon-drakitra momba ny mpampiasa roa ho A sy B tsirairay avy
Ny rindrambaiko APP sy PC maimaimpoana dia manome habaka fitehirizana tsy voafetra
Rindrambaiko APP sy PC maimaim-poana mamela anao hisintona / hijery / hanonta mora foana, tahiry ho PDF / JPG ary hizara tatitra amin'ireo mpitsabo.
Tatitra momba ny Lead I sy Lead II.
Fifandraisan'ny rafitry ny solosaina: Windows 7/8/10.
Famantarana azo antoka sy marina
Fifanarahana ventricular ventricular (PVC)
Tachycardia sy bradycardia
Azafady mba raiso izany rehefa mitady fandriam-pahalemana na tsy mahazo aina ianao.
* Fanamarihana: Ireo soritr'aretina rehetra ireo dia azo aseho ho "arrhythmia".
Multifunctional Vital Signs Monitor BNC1 miaraka amin'ny Performance Monitor tsara kokoa dia mametraka ny fiadananao ho ao am-pelatananao. Izy io dia misambotra ireo mari-pahaizana momba ny fahasalamana tena ilaina amin'ny felatanana ao anatin'ny 20 segondra! Ny vitals anao toy ny ECG / EKG, tahan'ny Pulse, Systolic Blood Pressure, Oxygenation, ary Temperature, ampiarahina amin'ny algorithms anay sy ny index Relaxation and Performance dia manome ny mpanjifa mahatsiaro fahasalamana miaraka amin'ny fampahalalana ilaina hanohanana fomba fiaina mahasalama na hampitombo ny fanabeazana sy ny regimens amin'ny fanatanjahan-tena.
Fanaraha-maso famantarana lehibe BNC1 Ny "Body Check" dia misambotra ny ECG / EKG, ny tahan'ny pulse, ny oxygen oxygen (SpO2), ny fihenan'ny tahan'ny fo (HRV), ary ny tsindry ra systolika. Relax Me BodiMetrics "Relax Me" Trainer dia mampiasa ny Heart Rate Variability (HRV) azon'ny Performance Monitor anay hanampiana anao hitantana ny haavon'ny fihenjanana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso mavitrika sy fanazaran-tena / bio-feedback.
Vital Signs Monitor BNC1 dia manara-maso ny dian-tongotrao amin'ny fomba mandeha sy mihazakazaka ho an'ny fiofanana sy fiofanana miovaova. Ny fisamborana dingana mandeha ho azy dia manafoana ny fidiran'ny tanana. Ny BodiMetrics dia azo alamina mba hampahatsiahy anao ny momba ny fanafody, ny fampihetseham-batana ary ny fandaharam-potoana amin'ny fizahana vatana amin'ny daty sy ora isan'andro.
Vital Signs Monitor BNC1 dia mampiasa Bluetooth handrindrana tsy misy tariby amin'ny Android na iPhone / iPad anao mba hizarana azo antoka ny angon-drakitra sy ny tatitra amin'ny fianakavianao, ny mpanazatra anao ary ny mpanolo-tsaina atokisanao.
Vital Signs Monitor BNC1 dia mora ampiasaina, tafiditra amin'ny felatananao ary manana androm-piainana maharitra herinandro maromaro miaraka amin'ny fampiasana mahazatra amin'ny enta-mavesatra iray (tafiditra ao anatin'izany ny bateria azo averina). Midoboka ao am-paosinao ilay fitaovana raha mandeha na mihazakazaka ianao.
Teo aloha: Nebulizer Portable Mesh Nebulizer JZ492E
Manaraka: Thermometer mialoha mialoha tsy misy fampiasa multifunctional
Bluetooth Portable Wireless EKG / ECG Monitor ...